Nweta ngwugwu njem nlegharị anya Dubai City
Ahụmahụ Dubaieze 212022-05-23T17:14:27+05:30
· Nyefe ọdụ ụgbọ elu mbata site na ọdụ ụgbọ elu Dubai International gaa na họtel Dubai na nkeonwe.
Ụbọchị ehihie na abalị / 03 na -anọ na nkwari akụ Three Star Dubai gụnyere nri ụtụtụ.
Royal Arabian Onye nnọchi anya ọdụ ụgbọ elu ga-anabata gị na mbata na ọdụ ụgbọ elu International Dubai. Nyefe ọdụ ụgbọ elu nkeonwe gị ga-echere n'ọdụ ụgbọ elu ma ị nwere ike zuru ike n'ụgbọ ala anyị ruo mgbe ị rutere na nkwari akụ.
Royal Arabian Ndị otu ga-eme ndokwa tupu ha abanye n'ụlọ nkwari akụ.
Na mgbede jikere ka ị nweta njem nlegharị anya gị na Dubai gaa n'ọkwa ọzọ! Jiri nwayọ banye ụgbọ mmiri ọdịnala anyị nke na-ese n'elu ala Dubai Creek akụkọ ihe mere eme n'ụzọ dị nro. Ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri anyị dị nkeji iri itoolu gụnyekwara nri nri nri na ihe ntụrụndụ n'ime ụgbọ mmiri.
Ịgbadata n'ọdụ ụgbọ mmiri dị jụụ nke Dubai Creek n'ọdụ ụgbọ mmiri Arab ọdịnala anyị, nke nwere nri abalị mara mma gbasapụrụ n'elu ụgbọ mmiri, bụ ahụmịhe dị iche iche nke obodo dị ịtụnanya, ile ọbịa na-enweghị atụ na ọrụ mara mma.
Nwee obi ụtọ nri ụtụtụ na nkwari akụ. Mgbe nri ụtụtụ zuru oke, jikere ka ị nweta ọmarịcha obodo Dubai nke nwere onye maara nke ọma na ahụmahụ. Royal Arabian Nduzi. Onye ndu anyị ga-ahazi ma nabata gị site na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na isi iji chọpụta Dubai. Ọ ga-abụ njem nlegharị anya Dubai nke ọkara ụbọchị na nkekọrịtara ebe ị ga-ahụ saịtị akụkọ ihe mere eme na ndụ dị egwu nke Dubai.
Njem a ga-ekpuchi ochie Dubai, Dubai ọhụrụ, akara ngosi na ebe a na-eme ememe.
Ị nwere ike iburu ụgbọ ala iji laghachi na nkwari akụ mgbe ịzụ ahịa gasịrị. Nọrọ abalị na nkwari akụ.
Nwee obi ụtọ nri ụtụtụ na nkwari akụ. Oge ntụrụndụ maka ịzụ ahịa n'onwe gị. Ndị otu anyị ga-enyere gị aka na nkọwa nke ụlọ ahịa ịzụ ahịa na nhọrọ ịzụrụ kacha mma dị. Anyị nwekwara ike inyere gị aka na njem ịzụ ahịa na ọnụ ahịa ọzọ.
Ụdị ime ụlọ: Standard Room price
Ịkekọrịta Otu $ 305
Ịkekọrịta ugboro abụọ (ọnụego otu onye) $ 199
Agba okenye ọzọ $ 189
Ịkekọrịta ụmụaka na -enweghị akwa ọzọ $ 129
Aha ụlọ nkwari akụ: Citymax Hotel Bur Dubai ma ọ bụ ihe yiri ya
Typedị :lọ: Ụlọ Obere
Tiketi mbata gaa ebe nkiri ndị ọzọ karịa nke ekwuru n'elu ma ọ bụ njegharị nhọrọ ma ọ bụ ebe ọ bụla akọwapụtara.